Ongage: Chinja Email Vendors pasina Kuchinja Yako UI! | Martech Zone
Ongage: Chinja Email Vendors pasina Kuchinja Yako UI!
Chishanu, Mbudzi 15, 2013 Chishanu, Mbudzi 15, 2013 Douglas Karr
Pandakanga ndichishanda kumubatsiri webasa reemail semaneja wechigadzirwa, ndakauya nezano rakandiwanisa mashoma asingatarisi mukati. Panguva iyoyo isu tanga tine vashoma vanogadzira vaishanda pane yedu API zuva nezuva uye taive nemakumi gumi nemaviri aishanda pane yedu yekushandisa interface. Iyo yekushandisa interface yaive mamirioni emitsetse yekodhi uye yakachengeta rutsigiro uye madhesiki manejimendi manejimendi akabatikana zuva rese. Zvakare, yedu API yanga ichitumira mamwe maemail uye, kana mutengi angokwira, isu taisambonzwa kubva kwavari zvakare.
Pfungwa yangu? Gadzira mushandisi interface kuti ushandise iyo API uye wozopa mushandisi interface kure. Ndizvozvo chaizvo ... ingo vhura sosi yacho woiisa pamusika. Rega makambani ashandise chero zvidimbu zvavaida uye bvisa zvimwe. Iyo kambani yakavhunduka kuti ini ndaizouya nehurongwa hwakadai. Nehurombo, havana kumboziva kuti kukosha kwavakaunza kwaive mukutumira meseji, kwete kuivaka. Ongage iri kumberi-kumagumo iyo inosangana kune vanopa email rubatsiro pasi rese kuburikidza neiyo OngageConnect chikuva.
OngageConnect ™ ndiyo yepasirese email kushambadzira chikuva chakabatana kune vakawanda vanopa email basa (ESPs). Izvi zvinobvumidza masangano kuomesa nzira maemail avo kuburikidza nevatengesi vazhinji kubva kune imwe nyore kumberi-kumagumo. Iyo zvakare email kushambadzira kumberi-kumagumo kwegore SMTP relay services. Iyi bhenefiti inogonesa masangano kugona kusimbisa masimba eakawanda ESPs uye SMTP kudzosera, kuitira kuti vagadzirise email kuburitswa uye kuwedzera email kushambadzira kuita uye ROI.
Zvichienderana nezvinodiwa, iwe unogona kutumira maemail zvakachipa kuburikidza neAmazon SES, gore-based SMTP masevhisi, kana boka revamiriri veemail. Mutengo chidimbu chemutengo yevamwe vanopa - iwe unofanirwa kunyatsovatarisa!
Tags: email yakawandadhizaina emailEmail Marketingemail nhauemail chikuvaemail kushumaemail mushandisi interfaceongage
Kugadzira Yakanakisa Kushambadzira Sangano.
LocalVox: Yemunharaunda uye Diki Bhizinesi Kushambadzira